Chii chinonzi makwikwi ekuchinjisa? | Kuumbwa uye kudzidza
Maite Nicuesa | 24/05/2021 21:56 | Kudzidziswa
Imwe yemabhenefiti ekuve mushandi wehurumende ndeyekuti chinzvimbo chehunyanzvi chinopa kugadzikana kwemari. Avo vanotova nechinzvimbo chakamisikidzwa, fungidzira ramangwana ravo nekumisikidza hukama pakati pemamiriro avo azvino nemamiriro ezvinhu anogona. Nekudaro, kunyangwe hazvo kuchengetedzeka kwehupfumi kuchitsanangura kugadzikana kwehunyanzvi hwehupenyu hwemukuru, izvi hazvireve kuti shanduko hadzipo mune basa revaya vanoshandira Public Administration. Zvinogona kuitika kuti pane imwe nguva, iyo nyanzvi inosarudza kutanga nhanho nyowani kune imwe nzvimbo.
Shanduko inoreva kutamira kune imwe manisiparasi uye, nekudaro, uchisiya kumashure maitiro aakachengetedza kusvika ipapo Makwikwi ekuchinjisa haazi chete maitiro anoshandiswa mune ino kesiAsi, izvi zvinoreva zvinoreva izvo zvinozivikanwa senzvimbo yekupedzisira yebasa revashandi vehurumende. Panguva iyoyo, akati nyanzvi yatove yake nzvimbo.
1 Dunhu kana mamiriro ekuchinjisa makwikwi
2 Chiyero chezvakakodzera chinopindira sei mumakwikwi ekuchinjisa
3 Nguva yekuendesa kusiya basa
Dunhu kana mamiriro ekuchinjisa makwikwi
Zvakanaka, makwikwi ekuchinjisa anonyanya kufarira kune avo vari mune ino mamiriro. Kubudikidza nemaitiro aya, nyanzvi inogona kugadzirisa shanduko iyi nekunyorera nzvimbo dzinowanikwa mune dzimwe nzvimbo. Makwikwi aya anogona kuzvimiririra kana nyika. Zvichienderana nerudzi rwemakwikwi, iko kuenda kwakaumbwa mune yakasarudzika mamiriro kana imwe.
Mune maitiro aya, zvinhu zvakasiyana zvinotorwa mukufungisisa, senge, semuenzaniso, chiyero chekukodzera. Kuendesa kunyorera kwako kumakwikwi ehunhu uhwu, zvakakosha kuti iwe unyatsoteerera kuburitswa kwekufona kunotevera. Nenzira iyi, unogona kurongedza chikumbiro chako. Ramba uchifunga kuti vamwe vazhinji nyanzvi vanogona zvakare kufarira kuzadzisa ichi chinangwa.
Chiyero chezvakakodzera chinopindira sei mumakwikwi ekuchinjisa
Nenzira iyi, kuyerwa kwezvakakodzera ndiyo imwe yenzira dzinoshandiswa kugadzirisa zvikumbiro. Kuti utore iyi ruzivo, iyo nyanzvi inofanirwa kuendesa magwaro anodikanwa muchikumbiro. Kufona kwakaburitswa kune zvakadzama data rine hukama neichi chiitiko. Tsanangura kuti ndiani mumakwikwi anoitirwa uye, nekudaro, inyanzvi dzinogona kutora chikamu. Uye zvakare, maitiro ekugadzirisa chirongwa ichi nenguva.
Rudzi urwu rwemaitiro runowanzoitika, semuenzaniso, muchikamu chekudzidzisa. Vatori vechikamu vanofanirwa kuendesa kunyorera kwavo mukati menguva yakatarwa yeichi chinangwa. Chiremera chine hunyanzvi chiri kutarisira kushambadza chisarudzo nemubairo wekupedzisira. Rudzi rwemakwikwi runogona kugadziriswa munzvimbo dzakasiyana, kuwedzera kune chikamu chedzidzo.
Nguva yekuendesa kusiya basa
Pane mamiriro akasiyana umo nyanzvi inogona kunge yakashandura maonero ayo maererano nechinangwa ichi. Pamwe mamiriro ako akachinja uye unosarudza kubva mumakwikwi. Izvi zvinoreva kudzima chikumbiro. Muchiitiko ichocho, kusiya basa kunofanirwa kuendeswa mukati menguva yakapihwa icho chinangwa mukufona. Mumwe mushandi wehurumende akazvipira maawa mazhinji ekudzidza kuti abvumire vanopikisa. Kubva panguva yazadzikisa chinangwa chayo chikuru, yawana zvimwe zvakafanira, zvinova izvo zvinoonekwa pachiyero chemakwikwi ekutamisa.
Munhu wega wega anovaka hunyanzvi hwehupenyu chirongwa chakanangana nemhuri kana nhanho yemunhu. Uye kuve mushandi wehurumende ndeimwe yemapurani ari chikamu chebasa rebasa revaya vanoda kuve nechinzvimbo chechigarire. Asi pane sarudzo dzakawanda dzinoitwa nemunhu muhupenyu hwake hwese kuti awane mufaro. Uye kukwikwidza kwekuchinjisa ndeimwe yesarudzo idzo dzinogona kukurudzira kurudziro. yemumwe munhu anoda kuve padyo nenzvimbo ine chirevo chepfungwa kwaari.
Ndeipi mimwe mibvunzo yaunoda kutaura nezvayo pamusoro pemakwikwi ekuchinjisa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » Noticias » Kudzidziswa » Chii chinonzi makwikwi ekuchinjisa?